Grills Electric: izinhlobo, izinzuzo
Indlela enhle ukuya nomkhaya wakhe ezweni, ukupheka kebabs noma inkukhu eyosiwe. Nokho, uma kukhona kungenzeka enjalo. Futhi uma ingekho? Indlela lowo endlini yakhe ufuna okuthile ukupheka into enjengaleyo? Esimweni esinjalo, aid kuyofika i hlupha kagesi. Kanti anizazeli yini nje wasungula kudivayisi okukhulu ukuthi kungabonakala zokudla noma amathilomu. Eqinisweni, ubuchwepheshe besimanje esenze sakwazi ukwakha grills compact ngokuphelele, okuyinto kungaba lula ukuhlela ngisho ekhishini kulencane. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Uma wazizwa ukwakheka isifiso ukuthenga umshini kuzokuvumela ukuzitika on inkukhu okumnandi noma inhlanzi phezu hlupha, bese banake izinhlobo namakhono yalezi amadivaysi. Ngokushesha baphonse umile grills kagesi, njengoba bakhulu for lungene ukusetshenziswa endlini yezwe. hlupha Electric, okubizwa ngokuthi ephathekayo, lena inketho yakho. Ngosizo lwakhe uyokwazi ukupheka inyama kanye nenhlanzi, ngaphandle kokusebenzisa amafutha.
Inketho ashibhe futhi okwamanje ethandwa kakhulu - emaceleni hlupha kagesi. isimiso sayo ukusebenza wukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ezibekwe phezu Izinsimbi, amanzi ugqoko itholakala ngaphansi kwazo. Ukushisa kwamanzi zingase zihluke, kuye ngokuthi imodeli - metal, ingilazi Ceramic, itshe. I linesizotha kunazo - ebusweni insimbi, ngoba kuzobiza ukwehlisa izindleko, futhi ngeke ukumnakekela kulula. Vitroceramic esabe amanzi abandayo futhi bahlanza sibi kakhulu. kuvela izinkinga ukugeza uma non stick Cookware, ngoba emibi kalula. Grill kagesi Emaceleni lula ukusebenza, kodwa ethile ukuthi imikhiqizo ke wabhaka ngokusebenzisa kulolu hlangothi, ngezikhathi ezithile banayo Pheqa.
Ekhaya, ungasebenzisa kabili emaceleni hlupha izinkukhu Electric. It uyahluka ngokuthi Ukushisa kwamanzi akuyona kuphela kusukela ngezansi, kodwa futhi phezulu, futhi kwezinye tinkhulumo emhlabeni. onobuhle okunjalo are qinile kakhulu ukupheka ngokushesha futhi ngokuyimpumelelo.
Nokho, nakani yokuxhumana hlupha kagesi. Kulokhu, isibonelo, inkukhu noma inyama kumele ogibele uhlomo (uhlomo) okuyinto ngesikhathi ukupheka kwakwenziwa njalo. Siyabonga kule divayisi kalula ekhaya ungakwazi ukupheka ngisho kebabs. Inombolo esephimisela incike model, abanye abaningi babo. Skewers angase abekwe kokubili thwi kanye nendawo. I-non-contact hlupha kagesi likhulu, kuwufanele kakhulu ezibizayo, kodwa silungiselela sibonga okumnandi futhi fast amandla ako eside. Ngaphezu kwalokho, asikho isidingo ukuvula phezu ukudla, futhi ungakwazi ukubuka konke ngomnyango ingilazi enqubeni ukupheka.
Lapha enjalo lapha kuyinto kagesi hlupha. Izibuyekezo sakhe ngempela omuhle, khuluma ngezinto inkukhu, inyama kanye nenhlanzi out namanzi kakhulu futhi elimnandi. onobuhle eziningi kukhona icwecwe, ngakho ngisho ikhishi elincane ngabo ukuthola indawo. Yiqiniso, ngesikhathi sokuthenga kufanele sinake hhayi kuphela amandla, kodwa futhi ngobukhulu. Lapho umndeni, aba maningi ubukhulu bendawo kufanele bube, futhi kudivayisi uqobo.
Yini ukubheka uma uthenga rekhoda nge-memory stick
Inzwa yamanje: Action isimiso futhi ububanzi
Impi esheshayo engahlomile kakhulu Heavy "Kunyatheliswa Oygen": izici eziyinhloko. Prinz Eugen (1938)
Isikhangiso. Ukukhiqizwa yokukhangisa signboards
Lenin. Biography of the umuntu omkhulu.